Shina mpanamboatra sy mpamatsy ny famatsiam-pako any Shina | Dongfang
Ny tombony azo avy amin'ny fantsom-pahavaratra amin'ny alàlan'ny hafanana. 2. Ny preheater an'habakabaka karazana misy antsika dia ahitana boaty, fantsona hafanana ary vilia dummy antonony. Mahazo tombony amin'ny hafainganana ny famoahana hafanana haingana sy ny fahombiazan'ny famindrana hafanana avo mba handresena ny olan'ny hafanana famindram-po ambany. 3. Ny faritra famindrana hafanana mivoaka avy any amin'ny faran'ny fantsona roa dia mampiasa fins hanitarana, ther ...
Ny tombony amin'ny lozan'ny rivotra mafana
1. Ny entona mikoriana sy ny rivotra miverina amin'ny làlana miolikolika mba hanamboarana fifanakalozana hafanana amin'ny rivotra, izay tena manatsara ny vidin'ny hafanana amin'ny setroka.
2. Ny preheater an'habakabaka karazana misy antsika dia ahitana boaty, fantsona hafanana ary vilia dummy antonony. Mahazo tombony amin'ny hafainganana ny famoahana hafanana haingana sy ny fahombiazan'ny famindrana hafanana avo mba handresena ny olan'ny hafanana famindram-po ambany.
3. Ny faritra famindrana hafanana mivoaka avy any amin'ny faran'ny fantsona roa dia mampiasa fins hanitarana, noho izany dia manamafy ny famindrana ny fantsona ivelany ivelany, mahomby amin'ny fampihenana ny habetsaky ny lanjany, ny lanjany ary ny angonin'ireo vy azo.
4. Ny takelaka fantsom-pahavoa-peo dia ampiharina amin'ny boiler hampitombo ny mari-pana ao anaty fihoarana mihoatra ny 150 ° C. Ny fitomboan'ny mari-pana ny rivotra dia tsara ho an'ny fandoroana ny solika, ary mitombo ny lafaoro amin'ny lafaoro ary mampihena ny fampiasana solika. Mampisondrotra ny fahombiazan'ny hafanana amin'ny boiler hatrany amin'ny 70%.
Ny fampitana ilay Pâteôntan'ny hafananaAir
1. Fametrahana mora: tsy mila fanovana boiler na lafaoro indostrialy.
2. Azo itokisana ny fivoriambe: mampiasa takelaka dummy antonony ka misaraka tanteraka ny hatsiaka sy ny hafanana. Ny fantsona hafanana simba iray dia tsy hisy fiantraikany amin'ny preheater an'ny rivotra sy ny fahombiazan'ny famindrana hafanana amin'ny ankapobeny.
3. volume kely: miaraka amina firafitra matevina sy fiantraikan'ny hafanana avo, ny hatsiaka sy mafana amin'ny fantsom-peo mafana dia mampiasa sombin-javatra manaparitaka mba hampakarana ny faritra arak'izay ilaina.
4. Fiatrehana ny korontana, ny vovoka kely: afaka manamboatra ny herin'ny fantsom-panafahana mba hifehezana ny hafanana amin'ny fantsom-panafody ary hisorohana ny fihoaran'ny tsipika asidra.
5. Fiainana maharitra: ny serivisy fanamainan'ny rivotra mafana dia manana fiainana mandritra ny 10 taona, miaraka amin'ny fikojakojana tsotra sy ny vidiny mora.
Taloha: Tube fanavaozana
Manaraka: Flue Damper
Preheater amin'ny rivotra
Cold Wall manangona fika
Fandroahana fanodinana an'habakabaka manelingelina
Preheater Air Cast -iron Finned
Ironisaly , fizarana fanafana , fampihenana Block , Heureur Transit , Railway , Machine Chill .